Kedu ihe bụ Evernote na otu o nwere ike isi baara gị uru: ihe ọ bụla ị maghị | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ Evernote na otu ọ nwere ike isi nyere gị aka
May nwere ike ịnụbeghị banyere Evernote tupu oge ahụ. Ma ọ bụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eji ngwá ọrụ dijitalụ a. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ ghọọla ezigbo ngwọta maka ijikwa ozi. Na iburu n'uche na taa enwere otutu ya, na anyị na-arụ ọrụ na nnukwu ya, ọ bụ ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mara ihe Evernote bụ, ihe eji ya, uru ọ na-eweta, ma karịa ihe niile, otu esi eji ya, gbaa mbọ hụ na ozi niile anyị kwadebeere gị. Na, n'ụzọ, ị nwere ike ịchekwa ya na Evernote gị.
1 Gịnị bụ Evernote
2 Maka kedu ihe ị ga-eji ya
2.1 Chịkọta ozi na .ntanetị
2.2 Kekọrịta ozi n'etiti ndị ọzọ
2.3 Nwere ike iji ya dị ka akwụkwọ onwe gị
2.4 Mepụta oghere ọrụ
2.5 Ga-enwe ike inyocha akwụkwọ
3 Uru nke iji Evernote
3.1 Inwe ike ịnweta data gị n'ebe ọ bụla
3.2 Ọ bụ n'efu
3.3 Engine nwere injin nchọ n’ime
4 Pesdị atụmatụ na Evernote
4.1 Evernote isi atụmatụ
4.2 Atụmatụ Evernote
4.3 Atụmatụ Evernote Business
Gịnị bụ Evernote
Evernote na-bụ Ngwaọrụ ga - enyere gị aka ịchekwa ozi, ma nke ị na-ahụ na andntanetị ma nke ị na-emepụta onwe gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ebe ọrụ gị na igwe ojii, ebe ị nwere ike ịchekwa ebe ahụ ihe niile dị mkpa ma ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ, ịnụ ụtọ, izu ike, wdg. na-enweghị mgbe niile ebu pen draịva, discs ma ọ bụ iji na kọmputa gị nchekwa.
Kedu ihe ị nwere ike ịchekwa? Otutu akwụkwọ, site na ibe weebụ, ozi ịntanetị, akwụkwọ, ihe oyiyi, akwụkwọ ... Uru ọ nwere bụ na ihe niile a nwere ike ịbụ nkewa, n'ụzọ ga - eme ka ị nwee diski ike ma mpụga na igwe ojii. Na mgbakwunye, ọ na - enyere gị aka ijikwa ozi niile ị natara na nke a na - emepụta, ị ga - enwe ike ịkọwa onyonyo, audios, vidiyo, captures, akwụkwọ ... n'otu ebe.
Iji maa atụ, were ya na ị ga-edebanye aha gị n'ọrụ. Kama idetu njikọ niile na ibe ebe enwere ozi, ị nwere ike ịme ka Evernote mee gị ya, na mgbakwunye na ịnya ihuenyo.
Maka kedu ihe ị ga-eji ya
Evernote nwere ike ịdị gị ka ihe ederede. Mana nke bụ eziokwu bụ na, n’agbanyeghi na mbido a pụrụ ịtụle ya otu ahụ, ugbu a ọ bụghịzị otu ahụ. Ọ na-agbanwe ma na-arụ ọrụ karịa. N'ezie, taa ọ nwere ike ịme ọtụtụ ihe dịka:
Chịkọta ozi na .ntanetị
Dịka anyị kwurula, ọ nwere ike ịchekwa URL nke ibe ịchọrọ, mana yana ịme Seta ọdịnaya, ma ọ bụ chekwaa olu ma ọ bụ ihe ndekọ vidiyo ịhụ ha mgbe e mesịrị.
Kekọrịta ozi n'etiti ndị ọzọ
You na-arụkọ ọrụ otu egwuregwu? Ọfọn, ọ dịghị ihe na - eme, ịnwere ike ịnweta ozi ahụ ị ga - ahụ ndị ọzọ. N'ezie, ebe a ị ga-ahụ ọdịiche abụọ: ọ bụrụ na ịnwere akaụntụ n'efu, ihe ị ga-enweta bụ na ndị ọzọ hụrụ ya, mana ha agaghị enwe ike idezi ya; Ọ bụrụ n'inwere akaụntụ adịchaghị, ee ee, ha ga - enwe ike ihu ma dezie ya na ndị niile keere akwụkwọ ahụ (ma ọ bụ folda ahụ n'onwe ya).
Nwere ike iji ya dị ka akwụkwọ onwe gị
Ma ọ bụ ederede. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụghị naanị nchekwa itinye ihe na ya; also nwekwara ohere nke ike ma dee ndetu ma ọ bụ akwụkwọ (na ndị ọzọ ị ga-emepụta akwụkwọ ahụ tupu bulie ya na igwe ojii).
Mepụta oghere ọrụ
Ọ bụghị naanị n'ihi inwe ike itinye ozi, mana n'ihi na Evernote na-enye gị akaụntụ email ị nwere ike iji zigara ya ihe niile ịchọrọ ịzọpụta. Na ị nwere ozi email dị mkpa ma ịchọrọ ịchekwa ya wee ghara ịla n'iyi? Ọfọn, ọ dịghị ihe, ị zigara ya (ma ọ bụ tinye ya na ndabara na a na-eziga ozi ịntanetị niile na email ahụ) ya mere Evernote na-enweta ya ma chekwaa ya na folda ịchọrọ.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ha bụ ihe ọrụ, ị ga-enwe nkwado ndabere na mpaghara mgbe niile.
Ga-enwe ike inyocha akwụkwọ
Wouldnye ga-asị, nri? Ihe kachasị mma banyere Evernote abụghị naanị na ọ na-enyocha akwụkwọ ahụ, ọ na-amatakwa ederede ma nwee ike ịmepụta akwụkwọ ma ọ bụ pdf na ederede ahụ (yabụ ịchefu maka ịdegharị ihe dị na onyonyo ahụ).
Uru nke iji Evernote
Ugbu a ị matara ihe Evernote bụ, yana ojiji ị nwere ike inye ya, n'ezie ị nweela echiche maka uru ọ na-ewetara gị na ndụ gị kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị n'ọkwa ọrụ, kamakwa na ọkwa onwe. Mana anyị ga-egosipụta nke kachasị mkpa n'ime ha:
Inwe ike ịnweta data gị n'ebe ọ bụla
Were ya na ị nwere kọmputa n’ebe ọrụ, nke a abụghịkwa otu nke ị nwere n’ụlọ. Agbanyeghị, ịchọrọ data sitere na kọmpụta ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ịchekwala ihe dị mkpa ma chefuo ịnyefe ya na USB. Evernote dị ebe ahụ n'ihi na ga-emekọrịta na kọmputa niile ebe inwere ya tinye mgbanwe niile ị na-eme.
Yabụ, ị ga-enweta data gị na kọmputa ọ bụla, na-eji akaụntụ gị.
N'ezie, ọ gaghị abụ naanị nnweta dị n'etiti kọmputa, ọ bụkwa maka gam akporo, Windows Phone, Apple ...
Anyị agaghị agwa gị na ihe niile bụ n'efu, n'ihi na ọ bụghị eziokwu, mana iji ya na ngwaọrụ niile ọ bụ n'efu. Nsogbu bụ na ụdị a "amachi", ọ bụ ezie na o zuru ezu maka ojiji nkeonwe (ma ọ bụ ọbụlagodi ọkachamara).
Mgbe a chọkwuru ihe ọ na-akwụ ụgwọ nsụgharị.
Engine nwere injin nchọ n’ime
Yabụ na ịkwesighi icheta ebe ị tinyere ihe, ma ọ bụ aha. Site njin ọchụchọ ị ga - enweta ihe ị na - achọ n’ụzọ dị mfe. Nke ahụ ga-egosi na oge ị nọrọ iji nweta nsonaazụ.
Pesdị atụmatụ na Evernote
Ọ bụrụ n’ị gaa n’ihu Evernote peeji a, ị ga - achọpụta na o nwere ụdị atụmatụ atọ (ọ bụ ezie naanị otu bụ n'efu). Ndị a bụ:
Evernote isi atụmatụ
Ọ bụ atụmatụ efu. N'etiti ọrụ ya, ọ ga-ahapụ gị ịkọwapụta, tinye pdfs, nnata, faịlụ na dọkụmentị; were webụsaịtị; jikwaa oghere Evernote gị (belụsọ ọchụchọ n'ime dọkụmentị ma ọ bụ nyochaa ụdị dọkụmentị); kekọrịta ndị ọzọ ...
N'ezie, buru n'uche nke ahụ ị nwere naanị 60MB nke ibu ọnwa na ị nwere ike iji naanị ngwaọrụ abụọ na akaụntụ gị (ọ gaghị ekwe ka ị ọzọ).
Akaụntụ 6,99 euro (7 euro) kwa ọnwa. Ọrụ ya dịtụ elu karịa nke isi, ebe ọ bụ na ebe a ọ ga-enye gị ohere ịchọ akwụkwọ ahụ, mana ị gaghị eso onye ọ bụla nọ n'ụlọ ọrụ gị kerịta ihe edeturu na akwụkwọ ndetu. Agaghị enye gị ohere ịmepụta oghere ọrụ iji rụọ ọrụ otu, ma ọ bụ nwee ngwa ọrụ na bọọdụ mkpọsa mebere, ma ọ bụ dezie ndetu na oge.
N'ebe a kwa ọnwa na-aga 10 GB ma ị nwere enweghị ngwaọrụ.
Atụmatụ Evernote Business
Maka opekata mpe ndị ọrụ abụọ, ọnụ ya bụ euro 13,99 (14) kwa ọnwa maka onye ọrụ ọ bụla (ya bụ, ọ bụrụ na ị bụ abụọ, ị ga-akwụ ụgwọ ihe ruru euro 28. Dịka ọrụ ya, ha meghere karịa ( ị ga - enweta ngwa ọrụ zuru ezu) 2 GB kwa onye ọrụ na ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke oghere mmekorita.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Kedu ihe bụ Evernote na otu ọ nwere ike isi nyere gị aka
Otu esi ere na ntanetị
Kedu ihe bụ MailChimp na otu o si arụ ọrụ